Memory Transmitting Indlu Yeenkumbulo - Imagazini yoyilo
Indlu Yeenkumbulo Le ndlu ihambisa imifanekiso yasekhaya ngemithi yeenkuni kunye nesitaki esimileyo sezitena ezimhlophe. Ukukhanya kuhamba ukusuka kwizithuba zezitena ezimhlophe ezijikeleze indlu, ukudala imeko ekhethekileyo yomthengi. Umyili usebenzisa iindlela ezininzi ukusombulula umda kolu lwakhiwo lweendawo zokuhambisa umoya kunye neendawo zokugcina. Kwakhona, dibanisa izixhobo kunye nememori yomthengi kwaye ubonise ubuhle obufudumele kunye nobukhenkethi ngokwakhiwa, ukudibanisa isitayile esiyingqayizivele sale ndlu.
Igama leprojekthi : Memory Transmitting, Igama labayili : Tienyu Wu, Igama lomthengi : TYarchistudio.
Indlu Yeenkumbulo Tienyu Wu Memory Transmitting